Nivavaka i Hana dia Nahazo An’i Samoela | Tantara ao Amin’ny Baiboly
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Cinghalais Dangme Danoà Dayak Ngaju Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibinda Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Irlandey Isoko Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Pendjabi Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Romanianina Rosianina Rutoro Rômania (Macédoine) Sirilika Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Nisy lehilahy israelita atao hoe Elkana, nanana vady anankiroa, dia i Hana sy Penina. I Hana no tena tiany. Tsy nanan-janaka anefa i Hana, fa i Penina nanana be dia be. Nambanimbanin’i Penina foana àry i Hana. Fanaon’i Elkana ny mitondra ny vady aman-janany any Silo isan-taona, mba hivavaka amin’i Jehovah ao amin’ny tranolay masina. Fa indray mandeha, tamin-dry zareo tany, dia hitany i Hana nalahelo be. Hoy izy: ‘Hana a, aza mitomany fa ianao ange manana an’ahy e! Dia tiako be koa ianao.’
Nandeha nitokana kely i Hana avy eo mba hivavaka. Nitomany be mihitsy izy sady niangavy an’i Jehovah hoe: ‘Jehovah ô, raha omenao zanakalahy aho, dia homeko anao izy hanompo anao mandra-pahafatiny.’
I Ely no mpisoronabe tamin’izay. Hitany i Hana nifokofoko nitomany ka noheveriny fa mamo. Hoy anefa i Hana: ‘Tsy mamo izany aho, tompoko, fa tena manana olana be, ary resahiko amin’i Jehovah ilay izy.’ Dia hoy i Ely: ‘Hay ve e! Enga anie àry mba homen’i Jehovah anao izay tadiavinao!’ Tsy nalahelo be intsony i Hana avy eo dia lasa nandeha. Nanan-janakalahy tokoa izy, herintaona latsaka taorian’izay. Dia nataony hoe Samoela ny anarany. Faly erỳ i Hana!
Tadidin’i Hana foana ilay teniny tamin’i Jehovah. Vao nisara-nono àry i Samoela dia nentiny tany amin’ny tranolay masina. Hoy izy tamin’i Ely: ‘Ity zaza ity ilay nangatahiko tamin’izaho nivavaka iny. Fa izao izy homeko hanompo an’i Jehovah mandra-pahafatiny.’ Namangy an’i Samoela foana i Elkana sy Hana isan-taona, ary nitondra akanjo vaovao tsy misy tanany ho azy. Mbola nomen’i Jehovah zanakalahy anankitelo sy zanakavavy anankiroa koa i Hana.
“Mangataha foana, dia homena ianareo. Mitadiava foana, dia hahita ianareo.”—Matio 7:7
Fanontaniana: Fa naninona i Hana no nalahelo be? Inona ny zavatra tsara nataon’i Jehovah ho an’azy?
1 Samoela 1:1–2:11, 18-21
Noresahin’i Hana Tamin’i Jehovah Izay Rehetra tao Am-pony
Nino an’i Jehovah i Hana, ary izany no nanampy azy hizaka ny tsy eran’ny ainy.
Karatra Ara-baiboly: Hana
Valian’Andriamanitra ny vavaka voafaritra tsara.
Nampian’i Hana Hanompo An’i Jehovah i Samoela
Hanampy ny ankizy 3 ka hatramin’ny 6 taona hahafantatra momba ny fanomezana nentin’i Hana isan-taona ho an’i Samoela ity kilalao ity.
Iza no Hampaherezinao?
Hanampy ny ankizy 8 ka hatramin’ny 12 taona hampahery ny hafa ity kilalao ity.